कलाले समाजलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ : नेता प्रदीप ज्ञवाली | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
२०७४ चैत्र ५, सोमबार , नेपाली समय : ०८:१२ pm | आजको खबर, संचालक : रेनुका बराल/९८४१७१६४६५ सूचना विभाग दर्ता नं. ७४/०७३-७४, सम्पादक- डिल्लीरमण सुवेदी/९८५१२७७७२१
२०७४ फाल्गुन २९, मंगलबार ०१:०१ pm | आजको पत्रिका
काठमाडौँ, २९ फागुन, नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद प्रदीप ज्ञवालीले कला समाजको ऐना भएको बताउँदै यसले समाजलाई प्रतिबिम्बित गराउनु पर्ने बताएका छन् । दश दिनसम्म चलेको 'काठमाडौँ कला मेला' को समापन कार्यक्रममा बोल्दै नेता ज्ञवालीले कलाले नै समाजलाई परिवर्तन गर्ने र सहिबाटोमा हिडाउने बताए ।
'काठमाडौँ आर्ट फेयर' को आयोजना गरेर नयाँ प्रतिभाहरुलाई प्रस्फुटन गराउने काम गरेकोमा आयोजकको प्रशंसा गरे । आफूभित्र भएको कलाको चेत आफूले मूल्याङकन गर्न नसकेको भन्दै नेता ज्ञवालीले मेलामा कलाकारको भावना पनि पढ्न र हेर्न पाएको बताए ।
उनले भने, 'नेपालमा भएका कलाले नेपालीहरुको विविधतालाई प्रस्तुत गरेका छन् । संस्कृति सधैँ एकैनास हुँदैन, अन्तरघुलन हुन्छ । एक अर्काका संस्कृतिका प्रभावहरु पर्दछन् । एउटा समूदायबाट अर्को समुदाय हुँदै संस्कृतिहरु विश्वव्यापी हुनजान्छन् ।' उनले नेपाली कलाको मौलिकता बचाउँदै समय सान्दर्भिक रुपमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।
अर्को प्रसङ्गमा बोल्दै नेता ज्ञवालीले साहित्य, कला, संस्कृति र संगीतको विकास र विस्तारका लागि आफू मन्त्री बनेकै बेला तीनवटा एकेडेमी निर्माण गर्न सकेकोमा खुसी लागेको बताए । ती तीन प्रतिष्ठानले एक अर्कालाई सौताको रुपमा नहेर्न आग्रह गर्दै नेता ज्ञवालीले विधा र क्षेत्र फरक फरक भएकोले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक रुपमा अघि बढ्न आग्रह गरे । कलामा कति निखार आयो, समाजलाई कति प्रतिबिम्बित गर्नु भयो भन्ने कुरा मुख्य हुने बताउँदै उनले सम्पत्ति वा भौतिक वस्तुको आधारमा मात्रै कुनै एकेडेमी ठूलो वा सानो नहुने बताए । नेपालले अहिले केन्द्रीय सरकार र प्रदेशमा सातवटा सरकारसहित ठूलो फड्को मार्न लागेको बताउँदै नेता ज्ञवालीले अब कला र संस्कृतिको विकासमा राज्यले प्रत्यक्ष र उल्लेख्य भूमिका खेल्ने आश्वासन दिए ।
पुनः अर्को प्रसंगमा बोल्दै नेता ज्ञवालीले समाज कता गइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै कलाकारहरुले समाजलाई सहि बाटो देखाउन लागिपर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'बाटोमा कोही लडिरहेको छ वा घाइते छ भने मानिस पहिले सेल्फी खिच्न र फेसबुकमा पोष्ट गर्न थाल्छन् । यो गलत संस्कृतिको विकास भयो ।' उनले मानिसलाई समाजप्रतिको उत्तरदायित्व सिकाउने काम पनि कला र कलाकारको भएको बताए । समाजमा केही आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरु हुने भए पनि कैलालीको घटनाले समाज नै अपराधिको चङ्गुलमा परेको उल्लेख गरे । समाजले अपराधलाई निर्मूल गर्नु पर्नेमा प्रोत्साहन दिएको यो घटना अत्यन्तै दुःखद रहेको उनले बताए ।
नेपाल ललितकला मञ्च र सांस्कृतिक संस्थानको संयुक्त आयोजनामा सो कार्यक्रम भएको थियो । सो समारोहकाबीच पौवा कलाकार दीपककुमार जोशीलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो ।